आज मात्रै एकैदिन विश्वभर ४ हजार ४०० उडान रद्द ! - jagritikhabar.com
आज मात्रै एकैदिन विश्वभर ४ हजार ४०० उडान रद्द !
शनिबार विश्वभर झन्डै ४ हजार ४०० हवाई उडानहरू रद्द भएका छन् । तीमध्ये २ हजार ५०० भन्दा धेरै उडान रद्द संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै भएका छन् । कोरोनाभाइरस त्रास र खराब मौसमका कारण क्रिसमसको याममा अमेरिकामा हवाई उडान रद्द हुने क्रमले नयाँ कीर्तिमान राखेको हो ।
एअर ट्राफिक साइट फ्लाइटअवेरका अनुसार अमेरिकामा रद्द भएकामध्ये १ हजारभन्दा धेरै उडानहरू सिकागोको ओहेर र मिडवे विमानस्थलबाट हुने उडानहरु थिए । वायुसेवाका धेरै कर्मचारीहरु कोभिड सङ्क्रमितको संसर्गमा आएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका कारण समेत समस्या झन् थपिएको बताइएको छ ।
यही संकटमा प्रतिकुल मासमले थप समस्या सृजना गरेको हो । मध्य अमेरिकामा भएको हिमपातले उडान रद्द र अर्को सास्ती थपेको थियो ।
युनाइटेड एअरलायन्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबारका उडान रद्द कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टले कर्मचारीहरुमा पारेको असर र मौसमसँग जोडिएका कारण भएको बताएको छ ।
आइतबार धेरैजसो मानिसहरू क्रिसमसको बिदा सकेर घर फर्कंने दिन थियो । तर उडान रद्द हुँदा यात्रुहरु अलपत्र परेको बताइएको छ । डिसेम्बर २४ यता अमेरिकामा मात्रै १२ हजार उडानहरू रद्द भएका छन् ।
लकडाउनको समस्यामा पर्नुभएका तनहुँका एक युवक गाउँमा फर्किएर व्यावसायिक रुपमा कालिज पाल्न थाल्नुभएको छ ।